अंग्रेजलाई एसियामा पहिलो पल्ट हराउने वंशु गुरुङ नेतृत्वको सिन्धुलीगढी युद्ध २५३ बर्षमा प्रवेश::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
गोर्खाली वीरताको सुनौलो इतिहास बोकेको सिन्धुलीगढी युद्धको इतिहास गत कार्तिक २४ गते देखि २५२ बर्ष पुरा गरेर २५३ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त दिनको सम्झनामा विशेष समारोहको आयोजना गरी भव्य रुपमा विजयोत्सव मनाउने गरिन्छ।
नेपाललाई सार्वभौम, स्वतन्त्र र अखण्ड बनाई राख्न निकै महत्वपूर्ण मानिने सिन्धुलीगढीमा भएको लडाइँमा नेपाली फौजले कप्तान ‘किनलक’को नेतृत्वको अङ्ग्रेज फौजलाई गोर्खाली सेनाका सरदार वंशु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले परास्त गरेको घटनाको सम्झनामा हरेक वर्ष कात्तिक २४ गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विजय दिवस मनाइने गरिएको छ ।
विसं १८२४ असोज १५ गते भएको उक्त युद्धमा एक हजार ६०० जति अत्याधुनिक बन्दूकधारी अङ्ग्रेज जवान ज्यान गएको थियो । सरदार वंशु गुरुङको फौजले चेपुवामा पारी अङ्ग्रेज फौजमाथि आक्रमण गरेको थियो । अङ्ग्रेज फौजसँगको लडाइँ असोजमा भए पनि लडाइँ सकेर फर्केको दिनलाई आधार मानेर कात्तिक २४ गतेका दिन विजय दिवस मनाउने गरिएको हो केहि इतिहासविदको भनाई छ ।
यो सिन्धुलिगढ़ी युद्ध नै विश्व बिजेता अंग्रेजको एसियामा पहिलो पराजय भएको केहि इतिहासविदको दाबि छ भने कसैले दक्षिण एसियामा अंग्रेजको पहिलो पराजय भएको दाबी गर्दछन ।
एकीकरणको महाअभियानमा सामेल धेरै सैनिक कमान्डरहरुलाई राष्ट्रिय बिभुति घोषणा गरिएको छ तर नेपालको इतिहासको यो यस्तो विडम्बना हो कि बिश्व बिजेता अंग्रेजलाई एसियामै पहिलो पल्ट पराजयको स्वाद चखाउने सरदार बंशु गुरुङलाई राज्यले आज पनि उपेक्षा गरेको छ । वर्तमान सरकारले बंशु गुरुङलाई राष्ट्रिय बिभुति घोषणा गर्दै उनको सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुदैन नत्र इतिहासले कदापी माफ गर्ने छैन ।
इतिहासको पाना नअटाएका नेपालका विभुति सरदार वंशु गुरुङ
(सेना नायक रसरदार वंशु गुरुङले वि.सं १८२४ , कात्तिक २४ गते सिन्धुलीको पौवागढीमा भएको अड्डा फौजसंगको युद्धमा अङ्ग्रेज फौजका कप्तान किनलोकको फौजलाई हराएर देशको अस्तित्व जोगाएका थिए र यो नै विश्व बिजेता अंग्रेजको एसियामा पहिलो पराजय थियो ।)
–बंशु गुरुङबारे मणिराम गुरुङको खोज यस्तो छ -नेपालको इतिहासमा सिन्धुलीगढीको ठूलो महत्व छ । गोर्खाली सेनाले ठूलो बहादुरी प्रदर्शन गर्दै हिन्दुस्तान (भारत) मा उपनिवेश कायम गरेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई ठूलो पराजय चखाएको स्थान हो, सिन्धुली गढी ।
गोर्खाली सेनाले नेपाल खाल्डो (काठमाडौं उपत्यका) मा पटक–पटक आक्रमण गरेको थियो, तर सफलता हासिल भएको थिएन । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंवरिपरिका राज्य, रजौटा आफ्नो अधीनमा लिँदै गएका थिए । काठमाडौंलाई घेराबन्दीमा पारेर अधीनमा लिने उनको योजना थियो ।
काठमाडौंलाई घेराबन्दीमा पार्ने क्रममा गोर्खाली सेनाले जित हासिल गरेको महत्वपूर्ण गढी थियो, सिन्धुली गढी । यो गढी गोर्खाली सेनाले विसं १८१९ मा जितेको हो । त्यसैले पनि सिन्धुली गढीमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको आँखा लाग्नु स्वाभाविक थियो । सिन्धुली गढीमाथि विजय प्राप्त गरेमा काठमाडौं उपत्यका हान्न केही सहज हुने र गोर्खाली सेनाको मनोबल पनि गिर्ने ठहर गरी इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले कप्तान किनलकको नेतृत्वमा आक्रमण गरेको थियो ।
यो विसं १८२४ कात्तिक २४ गते (सन् १७६७ नोभेम्बर ११) को घटना हो । नागबेली परेको बाटोको दायाँ–बायाँ घना जंगल थियो । करिब आधाजति उकालोको पश्चिमपट्टि ढुंग्रेबास पर्छ । गढीभन्दा करिब आधा कोसको दूरीमा रहेको ढुंग्रेबास (भञ्ज्याङ) मा सरदार वंशु गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना तैनाथ थियो । माथि काजी वंशीराज पाण्डे र खचाञ्जी वीरभद्र उपाध्याय करिब सात सयजति सेनासहित ब्याकअप फोर्सका रूपमा तैनाथ थिए ।
अंग्रेज फौज बिहानको खाना खाइसकेर गोला, बारुदसहित आदि आधुनिक हतियारसहित गढीतर्फ अगाडि बढ्यो । भरियालाई रसद–पानी बोकाएर अगाडि बढेको अंग्रेज सेनाको अफिसर हार्डी थिए । काजी वंशीराज पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय नेतृत्वको फौजले हार्डी नेतृत्वको अंग्रेज सेनामाथि आक्रमण ग-यो । आक्रमणमा हार्डी आफैँ घाइते भए । रसद–पानी नै छाडेर अंग्रेज सेनाको भागदौड मच्चियो ।
त्यहीवेला सरदार वंशु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले आधुनिक हतियारसहितको अंग्रेज सेनामाथि आक्रमण सुरु ग-यो । एकातिर वंशीराज पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय नेतृत्वको ठूलो संख्याको गोर्खाली फौज, अर्कोतिर सरदार वंशु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली फौजको आक्रमण । अंग्रेज सेना चेपुवामा प-यो । अंग्रेज सेनासँग बन्दुक धेरै भएकाले केहीबेर घमासान लडाइँ भयो । दुवैतिर केही सेना हताहत भए । तर, दुवैतिरबाट आक्रमणको चेपुवामा परेको अंग्रेज फौज अन्ततः हतियार छाडेर जंगलैजंगल भागे । (वैद्य, डा. तुलसीराम र अन्य, नेपालको सैनिक इतिहास भाग–२, विसं २०६५ पृ. ५४८) ।
आधुनिक हतियारले सु–सज्जित भए पनि अंग्रेज सेना पहाडी भू–बनोटमा अभ्यस्त थिएन । त्यसैले उनीहरू जंगलमा पसेर भागेका थिए । त्यसरी भागेकाहरूलाई पनि वंशु गुरुङ स्वयं तथा उनी नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले खुकुरी प्रहार गर्दै ध्वस्त पारे । गार्खाली सेनातर्फ करिब एक सय ५० जनाले वीरगति प्राप्त गरेको त्यो युद्धमा अंग्रेजतर्फ करिब चार सय फौज हताहत भएको बताइन्छ ।
करिब २४ सयको संख्यामा रहेको अंग्रेज सेनाले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेपछि कप्तान किनलक हार स्वीकार गर्दै बाँकी रहेको फौज लिएर जनकपुरतर्फ गएका थिए । यसरी सिन्धुली गढी कब्जामा लिने लक्ष्यसहित आएको अंग्रेजलाई पराजय चखाएपछि गोर्खाली सेनाको मनोबल झन् उच्च भएको थियो । सरदार वंशु गुरुङ र उनी नेतृत्वको गोर्खाली फौजले अंग्रेजी फौजको नायक क्याप्टेन किनलक र उनको फौजको मेन बडी (मुख्य फौज) माथि हमला गरेका थिए । पौवा (सिन्धुली) गढीमा सरदार वंशु गुरुङले ठूलो बहादुरी देखाएका थिए (शर्मा, शिवप्रसाद र अन्य, नेपालको सैनिक इतिहास, विसं २०४९ पृ. ३६८) ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमाथि विजय प्राप्त गर्दैै र ती देशमा औपनिवेशिक शासन गर्दै अगाडि बढेको अंग्रेज फौजले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक ठूलो पराजय भोगेको स्थान सिन्धुलीगढी नै रहेको बताइएको छ । हुन त त्यो अंग्रेज फौज काठमाडौं (तत्कालीन कान्तिपुर) का राजा जयप्रकाश मल्लको सहयोगार्थ आएको थियो । तर, विश्वभर औपनिवेशिक शासन कायम गर्दै आएको अंग्रेज त्यो विजय हात पार्न सफल भएको भए नेपाललाई पनि आफ्नो अधीनमा राख्न सफल हुनेमा दुईमत छैन ।
सरदार वंशु गुरुङ नेपाल एकीकरण अभियानमा ठूलो धक्का लगाउने अंग्रेजको सपनालाई चकनाचुर पार्दै एकीकरण अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने बाटोका एक वीर योद्धा एवम् सहयात्री हुन् । त्यसैले उनको नाम एकीकरण अभियान र नेपाली (गोर्खाली) सेनाको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ । त्यसैले सरदार वंशु गुरुङको बहादुरीको थप तथ्य र उनका सन्तानको खोजी गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
हामीले इतिहासको अध्ययन तथा जानकारीसँगै त्यसको मनन पनि गर्न सक्यौँ भने त्यो नै देशप्रतिको सच्चा माया ठहर्नेछ । राष्ट्रवादको शंखघोष हुनेछ । देशको माया गर्दै गर्व गर्न सक्यौँ र सिक्यौँ भने बल्ल देशको मुहार फेर्न सकिन्छ ।
सिन्धुलीगढीबारे पत्रकार हरिहरसिंह राठौरको शब्दहरु ब्रिटिशको इस्ट इन्डिया कम्पनी सेनाले पहिलो पल्ट सिन्धुलीगढीमा हमला गर्न आउादा नेपाली सेनाका कमान्डर बंशु गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खालीले गढी आउने बाटो वरपर सयाैं अरिंगालका गोला पहिचान गरिराखेका थिए र बाटो वरपर सयौं सिस्नुका झ्याङ लगाएर राखेका थिए ।
जब ब्रिटिश सेनाहरु गढी आक्रमण गर्न जंगलको बाटो हुादै आए, गोर्खाली सेनाले एकै पटकमा धनु कााडले सयौं राता र काला अरिङ्गालका गोला झारिदिए । यसपश्चात् रिसाएका ति अरिङ्गालहरुले टोकेर सयौं ब्रिटिश सेना बाटो वरपर मरे भने सिस्नुको पोलाई र अरिगालबाट आत्तिएर कैयन अंग्रेज सेना ज्यान जोगाएर भागे ।
चौबीस सयको संख्यामा आएका ब्रिटिश सेनामाथि यसरी ८०० गोर्खालीले बिजय प्राप्त गरेका थिए । एसियामा ब्रिटिश सेनाको यो नै पहिलो हार थियो । यसपश्चात् ४०/५० वर्षसम्म ब्रिटिश सेनाले नेपाललाई आक्रमण गर्ने हिम्मत गरेनन् ।
सिन्धुलीगढी युद्धको रोचक कथा यस्तो छ १८२४ कात्तिक २४ गते इस्ट इन्डिया कम्पनीका कप्तान किनलकको नेतृत्वमा आएको दुई हजार चार सय अंगे्रजी फौजलाई राजा पृथ्वीनारायण शाह पक्षका वंशु गुरुङ नेतृत्वको नेपाली फौजले सिन्धुलीगढीबाट भगाएको थियो। जसमा झन्डै एक हजार छ सय अंग्रेज सेना हताहत भएका थिए। अंग्रेजविरुद्धको यो जित दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलो विजय थियो भने अंग्रेजहरूको पहिलो पराजय।
विसं १३६७ मा सिम्रौनगढका सेनाहरूले काठमाडांैमा व्यापक लुटपाट गरी बनेपा हुँदै सिन्धुलीगढीको बाटो भएर विदेह राज्य (जनकपुर/सितामाढी) फर्केका थिए। इतिहासका घटनाक्रम अध्ययन गर्दा डोयहरूको आक्रमणको करिब ४० वर्षपछि जयस्थिति मल्लका पालामा अर्थात विसं १४०६ को मंसिरमा बंगालका शासक समसुद्दिन इलियासको फौजले काठमाडांैलाई लगभग ध्वस्त बनाई फर्किंदा पनि सिन्धुलीगढीको बाटो हुँदै बंगाल गएका थिए।
यो अपार क्षतिबाट विछिप्त भएर पुनःआक्रमणको प्रतिरोध एवं बचावटका लागि गढी स्थापना विसं १४११ र विसं १४५२ को बीचमा जयस्थिति मल्लले गरेका हुन्। राजा जयस्थितिले गढीको फेदीभन्दा केहीपर भारदारलाई सुराकीका रूपमा राखेका थिए।
काठमाडौंका राजा यक्षमल्लले अयोध्या र मगधसमेत नेपालमा गाभेपछि विदेशीलाई पुनः प्रत्याक्रमण गर्न नदिन विसं १५१५ तिर सिन्धुलीगढीलाई मजबुत बनाए। १५५६ तिर राजा शिवसिं मल्लले सिन्धुलीमा आक्रमण गरी विजय गरेपछि सिन्धुलीगढीलाई अधिकारमा लिएका थिए।
विसं १७४६ मा कान्तिपुरका राजा भुपालेन्द्र मल्लका भारदार र मोरङका बादशाह इन्द्रविधाता सेन (हरइन्द्र सेन) सिन्धुलीगढीमा भेला भई मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरेका गरेका थिए।
विसं १८७३ मा सुरु भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धको समयमा सिन्धुलीगढीको सामरिक महत्व बुझेर तत्कालीन जनरल भीमसेन थापाले सिन्धुलीगढीमा कानुनी रूपमा स्थायी सैन्य छाउनी व्यवस्था गरेका थिए। १८८६ माघमा जनरल थापाले पत्नी भक्तकुमारी देवीसहित सिन्धुलीगढीमा गारद सलामी लिएका थिए। यस्ता घटनाक्रमले सिन्धुलीगढीको महत्व बढाएको छ।